inombolo 1 ukuthandana app
Eyona nto ifanelekileyo yokubonisana nge-2021
Intwasahlobo ijikeleze ngokupheleleyo, kwaye ezonaapps zibalaseleyo zokuthandana zikulungele ukunceda ukuba iingcinga zakho ziguqukele kwezothando-ngakumbi ngoku izithintelo ezibangelwa bubhubhane ekuhlanganiseni abantu ngobuqu ziyancipha kwezinye iindawo.
Ayikuko ukuba ubhubhane ucothise ukukhula kokukhula kweenkqubo zokuthandana.Ingxelo yeNtengiso kwindawo yokubonana yokuthandana yafumanisa ukuba ii -apps ezingaphezulu ezingama-20 zokuthandana zabona abasebenzisi bemihla ngemihla abasebenzayo bekhula nge-1.5 yezigidi kunyaka ophelileyo.Ukongeza amanqaku engxoxo yevidiyo, njengoko uninzi lweenkqubo zokuthandana zenzayo, ngokuqinisekileyo zanceda.
Yiba nomzimba ophilileyo kunye nolona qeqesho lungcono lokuzilolonga kwisidlo esifanelekileyo
Ngoku, nabantu abakulungeleyo ukuya kwilizwe kwakhona, ezonaapps zibalaseleyo zokuthandana ziyaqhubeka nokucokisa amanqaku abo, ukuqinisa amanqaku ezokhuseleko ukukunceda uzive ukhululekile malunga nokunxibelelana nabantu ongabaziyo.Ezinye iiapps ziyaqhubeka ngokugqwesa ekukuncedeni ufumane ukungqubana nabantu abacinga ngokufana ngelixa abanye begxile ekuncedeni ukwakha ubudlelwane bexesha elide.Nokuba yeyiphi na enqwenelwa yintliziyo yakho, kukho iapp yokuthandana ngaphandle apho eyenzelwe indlela ojonga ngayo kunye neemfuno zakho.
Ukuba ufumanisa ukuba ufuna ubuhlobo, sinokukunceda ukuba uhlele iqela lezinto ezikhuphisanayo ukuze ufumane ezonaapps zilungileyo zokuthandana ezilungela iimfuno zakho ezithile.
Zeziphi ezonaapps zibalaseleyo zokuthandana?
Xa kuziwa ekufumaneni uthando kwiminyaka ephathekayo, kunzima ukuwisa iTinder, enye yezona zinkulu kunye neyona misebenzi ilungileyo yokuthandana ekonwabela ukufikelela kubanzi. I-Tinder inedumela lokukunceda ufumane ii-hook-ups ezikhawulezayo, nangona ikwenzelwe ukufumana amaqabane asisigxina kunye nezongezo zakutshanje kwi-app ziye zaphucula ukhuseleko lomsebenzisi ngelixa usongeza ividiyo.
Ezinye iinkqubo zokuthandana ziqhayisa ngamandla abo.IBumble inika amandla okwenza abahlobo abatsha kumalungu ayo ababhinqileyo, ngelixa i-OKCupid ibonelela ngezixhobo ezahlukeneyo zokufumana ukuthandana.I-Eharmony ine-algorithm yayo edumileyo yokudibanisa abantu, ngelixa eyona njongo iphambili yeHinge kukwenza abantu bayicime iapp kwiifowuni zabo (mhlawumbi ngenxa yokuba ufumene unxibelelwano oluhlala luhleli kwaye ungabinangxaki).Nokuba i-Facebook ingene kwisenzo, ngenkonzo yokuthandana ibotshelelwe kwinethiwekhi yayo enkulu yoluntu.
Ngaba ujonge iqabane lesini esifanayo?UGrindr wayenguvulindlela kweso sithuba, ngelixa u-Her ebonelela ngohlelo lokuthandana lwabasebenzisi abathandanayo nabasetyhini.
Ngaphambi kokuntywila ukuze ufumane olungileyo ukuthandana usetyenziso ukufumana iqabane elifanelekileyo, ungalibali ukuqaphela ubumfihlo.Sukukreqa nje ngaphaya kwemigaqo-nkqubo yabucala yayo nayiphi na inkqubo yokuthandana oyisebenzisayo, njengoko loo migaqo-nkqubo inokucacisa kanye ukuba yeyiphi indawo yokuthandana eyenzayo ngedatha yakho.Yazi ukuba uninzi lwee -apps ezithandanayo- kubandakanya uninzi kolu luhlu lweeapps ezithandwayo- zezabanenkampani enye.Umdlalo weQela, umzekelo, awusebenzisi iMatch.com kuphela kodwa kunye neTinder, OKCupid kunye nePlentyOfFish.
Ezona nkqubo zilungileyo zokuthandana okwangoku
1.Tinder (Android; iOS)
I-Tinder yatshisa umzila obekwe nguGrindr kwilizwe lokuswayipha kunye nokuskrola iinkqubo zokuthandana.Ebusweni bayo, i-Tinder ikukhuthaza ukuba wenze izigqibo ezinzulu, ezinqumlayo malunga namaqabane anokubakho.Uyila iprofayili elula eneefoto ezimbalwa kunye nezivakalisi ezimbalwa malunga nawe, emva koko uziphose kwinceba ye-Intanethi.
Insiza ibonisa ii-singles kwindawo yakho.Ukuba uthanda enye, swayipha ifoto ngasekunene;Ngaphandle koko, swayipha ngasekhohlo.Ukuba nobabini niswayipha ngasekunene, ungathumela imiyalezo kwaye usete into.(Unomdla wokuphakamisa umdlalo wakho weTinder? Sineengcebiso malunga nendlela yokusebenzisa iTinder njengepro.) Ukuphucula ubulungu obuhlawulelweyo be-Plus okanye iGolide kwiTinder ikunika amanqaku eprimiyamu njengokuthanda okungenamda okanye ukubuyisela umva okunika abaya kuba ngamaqabane okwesibini ithuba.
I-Tinder iyaqhubeka nokucofa ifomula yayo, ikhupha ividiyo ekuvumela ukuba wenze iifowuni ze-in-app kwimidlalo ngaphandle kokutshintshiselana ngeenkcukacha zakho (ukongezwa okubaluleke kakhulu kwixesha le-COVID-19).Olona tshintsho lubaluleke ngakumbi luzise iZiko lezoKhuseleko elibophelela kwi-app yeNoonlight kwaye libonelela ngeqhosha lokoyika xa usiya kumhla apho uziva ungakhuselekanga.Emva kwexesha kulo nyaka, i-Tinder iceba ukukuvumela ukuba wenze uhlolo lwabantu, utsala idatha kwiirekhodi zoluntu.Olo phawu luza kwezinye iinkqubo zokuthandana ezisebenza ngumnini weTinder Match Group, enyanisweni.
2. Ibumble (Android; iOS)
I-Bumble ijolise ekuncedeni ukuba udibanise imihla okanye wenze abahlobo abatsha kwindawo yakho, kwaye ikwinyosi yokumkanikazi (nawuphi na umntu obhinqileyo) ukwenza inyathelo lokuqala emva kokudityaniswa kwabantu ababini kwaye bayinxalenye yomzi omnye komnye.Akukho xesha lingako lokuchitha - kukho iiyure ezingama-24 kuphela zokwenza uhlobo oluthile lokunxibelelana okanye unxibelelwano lunyamalale ngonaphakade.Ukuqhagamshela abantu besini esifanayo okanye ubuhlobo, nokuba ngubani umntu kufuneka enze intshukumo kwiiyure ezingama-24 ngaphambi kokuba olo nxibelelwano luhambe, nangona ungafumana ulwandiso lweyure ezingama-24.
Ukujonga nje ukwandisa isangqa sabahlobo bakho, ngokuchaseneyo nobudlelwane bothando?IBumble inenqaku le-BFF kubantu abangajonganga mihla kunye necandelo elahlukileyo lokwenza unxibelelwano kwishishini.Ukuphuculwa kweBumble Boost, okususela kwi- $ 2.99 ukuya kwi- $ 8.99, kwenza kube lula kwaye kukhawuleze ukudibana okanye ukuhlangana nabantu.
I-Bumble yongeze ividiyo ezimbini kwiminyaka eyadlulayo, inika enye yeenkqubo zokuthandana ezithandekayo umlenze kwindawo yokuhlala.Ubusuku obutsha ukongeza imidlalo eye yaqala ngomdlalo we-trivia wokukunika kunye nomhla wakho into onokuyenza kwincoko yakho yevidiyo.
I-OkCupid inesixhobo esikhulu somsebenzisi kunye nezixhobo zokuthandana ngokuthe ngqo.Kodwa endaweni yokuphumla kwi-laurels yayo, i-OKC igcina isulungekisa kwaye isongeza kwiinkqubo zayo eziphezulu zokuthandana, ezinje ngenkqubo ye- "Flavors" evumela abasebenzisi ukuba babone ngokukhawuleza incasa evusayo yemidlalo enokubakho, enje ngeKinky Nerds, Abathandi beendevu, abahambi beHlabathi njl.
Konke oku ukongeza kwizixhobo zemiyalezo ze-OkCupid, imibuzo yobuntu, ukudityaniswa kwe-Instagram kunye nezinye izinto ezithandwayo ezindala.Ukubhaliselwa kwepremiyamu kongeza ezinye izinto, ezinje ngezixhobo zokukhangela ezihlaziyiweyo kunye nokukwazi ukubona abasebenzisi abakuthandileyo.
IMatch.com ibonelela abasebenzisi bayo ngamava okuthandana kwe-freemium kwi-Android nakwi-iOS.Abasebenzisi basimahla bangaseta iiprofayili ezikwi-Intanethi, bafake imifanekiso yabo embalwa kwaye emva koko bazibandakanye ekudlaleni ngothando kwi-intanethi "ngeewinks", kwaye banikwe imatshisi emitsha mihla le.Iinkalo ezibanzi, ezinje ngokukwazi ukubona ukuba ngubani okhe wakhangela iprofayile yakho kwaye wayithanda imifanekiso yakho, inokuvulwa ngobhaliso lweMatch.com.
Umdlalo uye waqhubeka ukongeza kwiimpawu zayo, ezinje ngeTinder-efana noMxube, i-Android Wear kunye nokudityaniswa kweApple Watch, kunye nokongezwa kwezikripthi zezwi kunye nevidiyo kwiprofayile yakho.Nge-Epreli, abantu bebambekile ekhaya, uMdlalo usungule iVibe Jonga, ekuvumela ukuba uzonwabele izingxoxo zevidiyo kunye nematshisi yakho.
NjengoTinder, uMdlalo wongeze inqaku lokhuseleko elikuvumela ukuba uqaphele abahlobo ukuba ungomhla kwaye uzive ungakhuselekanga.Olunye ulongezo lwamva nje lukuvumela ukuba usete izimvo zakho zopolitiko, ukuze ufumane ngcono umntu oneembono ezihambelana neyakho (okanye ungazenzi, ukuba uyakholelwa ukuba izichasi ziyatsala).
5. I-Facebook (i-Android, iOS)
Ukuthandana kuFacebook, ukutyhilwa okokuqala ngqa e2021, esungulwe e-US kunyaka ophelileyo emva kovavanyo oluqhutywa kwamanye amazwe.Le nkonzo sele isiya eYurophu, kubandakanya ne-UK
Inxalenye yokungena kwinethiwekhi yoluntu, ukuthandana kuFacebook kugxile ekuncedeni ukuba ufumane ubudlelwane bexesha elide, hayi amaqhina.Ungena kwicandelo lokuThanda ngaphakathi kwenkqubo ye-Facebook ephathekayo, ukuseta iprofayile yokuthandana eyahlukileyo kwiprofayile yakho ye-Facebook.Ukusuka apho, iFacebook ikufumanela imatshisi ngokusekwe kukhetho lwakho, umdla kunye nemisebenzi kwindawo yenethiwekhi yokuncokola.
U-Facebook akazukuphakamisa ukufana phakathi kwabantu osele ubazi ku-Facebook, ngaphandle kokuba usebenzisa into eyimfihlo yeNkonzo apho unokukhetha khona ukuya kuthi ga kwizihlobo zika-Facebook okanye kubalandeli be-Instagram onomdla kubo. Ukuba nabo banomdla kuwe Ukutyhilwa kweMfihlo, uFacebook uya kukufanisa.
Unokongeza iiposti ze-Instagram kwiProfayile yakho yokuFunda kuFacebook kunye nokwabelana ngamabali e-Facebook nawe-Instagram.Njengezinye iinkonzo zokuthandana, u-Facebook Dating wongeza amandla okwenza iminxeba yevidiyo kwi-sweetie yakho, usebenzisa i-app yenkampani ye-Messenger.
6. I-Grindr (i-Android; iOS)
I-Grindr ivumela amadoda athandana namanye amadoda kwaye adibane namadoda afanayo.Ukwenziwa kweprofayili ngamava amancinci, kugxilwe kwiprofayili, igama lomsebenzisi, kunye nemibuzo embalwa elula, kunye nokukhetha "iTribe" echaza uhlobo lwakho, emva koko unyuke ufumane abanye abasebenzisi kwaye uncokole nabo ngemizuzu.
I-Grindr isimahla ukuyisebenzisa kwaye ixhaswe yintengiso, kodwa inguqulelo yeprimiyamu, iGrindr Xtra, ibonelela ngokubhrawuza ngaphandle kwentengiso ukongeza kwezinye izinto ezinje ngokudibanisa iiNtlanga ezininzi kunye neefilitha zokukhangela eziphambili.Enye yecala elibi?Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo zokuthandana, tyhala izaziso zemiyalezo efuna iGrindr Xtra.
I-eharmony ngumdlali wexesha elide kumdlalo wokuthandana kwi-Intanethi, kunye nenkonzo yokuqala yokutyhala inkqubo yealgorithm yokuzama ukwenza eyona nto ifanelekileyo yokuthandana kwamalungu ayo.Nje ukuba wenze iakhawunti, abasebenzisi badlula "kwiPhepha lemibuzo loBudlelwane" ukwenza iprofayili yobuntu encedisa ukukudibanisa nabanye abasebenzisi abathi eharmony bacinga ukuba uza kucofa nabo.Yonke imihla, iapp iyakunika ukhetho lwemidlalo kunye neendawo zakho zokuhambelana;uya kuba nenketho yokudibanisa ukuba umdla uyahambelana.
Ababhalisi bePremiyamu bafumana ukhetho olwandisiweyo lokufumanisa kunye nokufumanisa, kunye nezinye izinto ezinje ngokubanakho ukubona ukuba ngubani osandula ukujonga iprofayile yakho.
Ikofu idibana neBagel (i-Android; iOS)
Ikofi Idibana neBagel ithatha indlela eyahlukileyo kuninzi lwee -apps ezithandwayo zokuthandana, izama ukugxila kumgangatho kunokuba kubungakanani.Yonke imihla emini emaqanda, iapp iyakuthumela amadoda ukhetho oluncinci olunokubakho ngokusekwe kwiprofayili kunye nezinto abazikhethayo, kwaye ke abafazi bathunyelwa inani lemidlalo abaye babonisa umdla kubo, beshiya amanenekazi ithuba lokuphindaphinda.Ukuba umtsalane uyavumelana, iapp iyakuseta ngefestile yengxoxo yeentsuku ezisi-7 kunye nomkhenkce.
Uhlengahlengiso lwenkqubo yokubonana ubeka ugxininiso olukhulu kwiiprofayili zomsebenzisi, ekunike amandla okubeka izimvo kwiiprofayili kunye neefoto ngethemba lokukhuthaza unxibelelwano ngakumbi phakathi kweKofi Idibana nabasebenzisi beBagel.
Khuphela uKofu Udibana neBagel: i-Android, i-iOS
9.Yakhe (Android; iOS)
Umsebenzi wakhe kukuthandana kunye nenethiwekhi yoluntu eyilelwe ngabasetyhini abathandanayo, abathandanayo nabasetyhini.Ubhalisela iakhawunti ka-Facebook okanye ye-Instagram, kwaye ujonge umsinga womsebenzi osuka kwabanye abasebenzisi baqinisekisiweyo kwindawo yakho nakwihlabathi jikelele.Ungathanda Iifoto zabanye abasebenzisi, kwaye ukuba umdla uyavumelana, usetyenziso luyakukuqhagamshela ukuze uthethe.
Ewe kunjalo, ingaphezulu kokuhlangana nje kweentsuku ezinokubakho, kunye nenkqubo enikezela ngeempawu zentlalo, iindaba kunye namanqaku malunga nemicimbi ye-LGBTQ, iminyhadala, imibuzo kunye nokunye.Ngelixa usetyenziso lusimahla ukulusayinela, ukubhaliselwa kwepremiyamu kongeza amanqaku ongezelelweyo.
10.Ihenjisi (Android; iOS: $ 10.99 / ngenyanga)
Ukwala ukulandela umzila ovuthiswe zii -apps eziqhutywa ngokuswayipha ezinje ngeTinder, ukuthandana insiza yeHinge ibeka ukugxila kubudlelwane nakwincoko enomdla.Ngapha koko, injongo eceliweyo yenkonzo kukusa kwinqanaba lokuba ucime iapp ngokupheleleyo - mhlawumbi ngenxa yokuba ufumene uthando hayi kuba unayo le app.
Ihenjisi ijika impumlo yayo ngokuswayipha iprofayili eneenkcukacha ezininzi oyizalisa ngemifanekiso kunye namabali.Abasebenzisi banokukhetha ukuthanda kunye nokubeka izimvo kwinto ethile kuloo profayile, kwaye isebenza njengesiqalo sokuncokola.Yonke imihla, ungakhangela iingcebiso ezintsha, kunye nokubona abantu abayithandayo into kwiprofayile yakho.
Ihenjisi iphendule ngokukhawuleza kwindawo yethu yokuhlala kwindawo ebekwe sisifo secoronavirus ngokukhupha uMhla ovela kwiimpawu zasekhaya.Olunye utshintsho lubandakanya ukudibana kunye nokuthandwa kweChipotle kunye neUber Eats ukukhuthaza abasebenzisi ukuba babe nemihla yokutya ekude ekuhlaleni.Kwaye ukuphinda uyile unyaka ophelileyo wazisa inqaku le-Standouts eligqamisa abantu ekunokwenzeka ukuba babe luhlobo lwakho, kunye nezihloko uHinge acinga ukuba ziya kubangela incoko kunye nomdlalo wakho.
Khawufane ucinge iTikTok, kodwa ukuthandana, kwaye unengqiqo entle yento efunwa yi-Snack.Le app yokuthandana ibeka ugxininiso kwiividiyo ezimfutshane.Uhlela ngokutya kweevidiyo ezikwintshayelelo ukubona ukuba ukhona na umntu onomdla kuwe, uthanda abo ungathanda ukubazi.Ukuba bayayithanda ividiyo yakho, uya kuba nakho ukubekelana i-DM.
Ugxininiso kwividiyo lwenza ukuba i-Snack ibe yinto elungileyo yokuthandana app kumaxesha ethu ekuhlaleni, nangona kugxilwe ngokucacileyo kwisihlwele esingaphantsi kweminyaka engama-30.I-Snack ifumaneka kuphela kwi-iPhone okwangoku, nangona ungabhalisela ukwaziswa xa inguqulelo ye-Android iyehla.
I-XO ifuna ukubeka ulonwabo kwakhona ekuthandaneni ngokusebenzisa imidlalo ukunceda ukwaphula umkhenkce.Imibuzo, ukuzoba imidlalo kunye neminye imisebenzi yeqela mayenze ukuba wabelane ngokuhleka nomntu omtsha kwaye mhlawumbi wenze unxibelelwano olukhokelela kubudlelwane.
Ufumana imatshisi ngokugcwalisa iprofayili kunye nokudibana nomntu othanda izinto ezifanayo.Okanye ungazama enye ye-XO enye, ukudibanisa okungakhethiyo.Umhla ongaboniyo ubeka umnxeba nomntu othile wokudlala umdlalo kunye nokutshintshiselana imiyalezo ngaphambi kokuba ubone iiprofayili zabo, ngelixa u-Random ekubeka kunxibelelana nomntu naphina emhlabeni.
Abantu abazimiseleyo ngokufumana enye into ebalulekileyo ngoku banokufuna ezinye zezonaapps zibalaseleyo zokuthandana, kodwa i-XO ibonakala iyindlela emnandi, engaqhelekanga yokwenza abahlobo abatsha- kwaye mhlawumbi nobuhlobo buqhakaza bube yinto engaphezulu.
Ewe kunjalo, zininzi iindlela zokwenza umdlalo kwi-Intanethi, kwaye uKippo ujonge ukutsala abadlali be-Intanethi ekukhangeleni iqabane elincinci.Insiza ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso iprofayile yakho-eyahlukileyo ngakumbi, ingcono-apho unokubonisa khona izinto ozithandayo ngokwenene.Uhlelo lokusebenza luzama ukufumana imatshisi ngokusekwe kwimidlalo oyithandayo.
Nje ukuba ufumane umdlalo, ukulungele ukuya kwi-DM kwaye uncokole, nangona inqanaba lasimahla leKippo linomda othile kwiiprofayili ongaswayipha ngazo yonke imihla kunye nokuba ungathumela imiyalezo emingaphi.Ukujoyina i-Kippo Infinity tier ye-10 yeedola kususa ezo zithintelo.
U-Kippo uthi iqinisekisa ukuba wonke umntu osebenzisa inkonzo yakhe ngumntu wokwenyani, kwaye kukho ukumodareyitha ukugcina abadlali abakhohlakeleyo.
Nje ukuba ufuna ukucothisa ezo swipes zixakekileyo njengoko uzama ukufumana umdlalo wakho ofanelekileyo.Endaweni yokuba umtya ongapheliyo weefoto oza kuhlengahlengiswa, Nje ukuba ubhangane kunye neqabane elinokubakho ngosuku, kwaye uneeyure ezingama-24 zokwenza unxibelelwano.Ungahlala uncokola emva koko ukuba nobabini nithanda omnye, kodwa umbono kukugxila kumntu omnye ngexesha, ukuze ubone ukuba unxibelelwano oluhlala luhleli lunokwenzeka.
Ukutshatiswa kuyenziwa kunye nealgorithm, etsala iprofayili kunye nokuziphatha kwakho kwangaphambili ukufumana umdlalo ofanelekileyo.Ungasebenzisa Kanye simahla, kodwa ubulungu obuhlawulelweyo bukhawulezisa inkqubo yokukhangela kwaye bakunike iimatshisi ezininzi ngemini ukuba ukhetha njalo.
Indawo yeappn (Android, iOS)
I-Happn imalunga nabantu abanokuwela iindlela ongabafumana benomdla kwaye banokuba besenza kwaezo zinto uzenzayo.Inkonzo yokubonana esekwe kwindawo, uHappn ikubonisa iiprofayile zabanye abasebenzisi beHappn owele iindlela, kunye nexesha kunye nendawo.Ungazithanda naziphi na iiprofayili ezibonisa, kwaye ukuba imvakalelo iyahambelana, usetyenziso lunika inketho yokuqhagamshela.Izinketho ezihlawulelweyo zinika amandla okuthi "Yithi Hi" kwezinye iiprofayili, ezibandakanya isaziso, kunye nokukwazi ukubona iiprofayili ezikuthandayo.
Raya (iOS, $ 7.99 ngenyanga)
Kwenye indawo phakathi kothungelwano lobungcali kunye nenkonzo yokuthandana ehlawulwa kwi-paywall kuhlala i-Raya ye-intanethi.Uhlelo lokusebenza lwe-iOS ekuqaleni lwaqala njengenkonzo yokutshata esezantsi, kodwa ikwaqala ukusetyenziselwa ukwenza unxibelelwano ngobuchule kunxibelelwano kunye nabahlobo, ngakumbi phakathi kwabo bakwimizi-mveliso yokuyila.Inyaniso yokuba abantu abadumileyo kunye nabaphembeleli baqalisile ukuvela kuRaya kusenokwenzeka ukuba banceda iprofayile yohlelo lokusebenza phakathi kwezonaapps zibalaseleyo zokuthandana.
Awungeni nje kwiRaya ngokuzenzekelayo - amalungu anokufuna ukuthumela isicelo, esiya kuvavanywa, ngaphambi kokuba ungeniswe.Ukuba uyangeniswa kwiklabhu, ubulungu buya kubiza i-7.99 yeedola ngenyanga, okanye i-29.99 yeedola ngaphezulu kweenyanga ezi-6.
Inala yokuDibana kweNtlanzi (i-Android; iOS)
Inala lokuDibana kweNtlanzi alinabunzulu beempawu ezifumaneka kwezinye iiapps, kodwa zenzela ububanzi.Le app yasimahla yokuthandana yenye yezona zikhulu kwaye zaziwa kakhulu kwihlabathi, ziqhayisa ngaphezulu kwamalungu angama-70 ezigidi kwihlabathi liphela elithetha isiNgesi.
Abasebenzisi baseta iprofayili elula, kubandakanya iminyaka, imfundo kunye noqeqesho, emva koko bakhangele kwimidlalo enokubakho kunye nemiyalezo.Intabalala yeentlanzi igcina isongeza ii-tweaks ezincinci kwi-app yayo, kubandakanya iiNtloko zeNgxoxo zabasebenzisi be-Android, iVoIP ebiza abasebenzisi beprimiyamu kunye nokulayishwa kwemifanekiso ye-Instagram.Uyakufumana indawo yasimahla eshukumayo ekhuthaza ukuthandana ngaphezulu kwevidiyo.
18. IBadoo (Android; iOS)
Ukuma kwindawo etyebileyo yokuthandana, i-Badoo inezigidi ezingama-370 kunye nabasebenzisi abavela kumazwe angaphezu kwe-190 ahlukeneyo, bonke besabelana ngeeprofayili kunye neefoto zabo njengoko bekhangela umdlalo.Insiza isebenzisa iindlela ezininzi ezahlukeneyo zokufumana umdlalo onomdla, ukusuka kwinkqubo yokutshiza efana neTinder ukujonga iiprofayili zabasebenzisi abakufutshane.
I-Badoo ibeka ipremiyamu ekuqinisekiseni ukuba abasebenzisi bayo ngabantu abaqinisekisiweyo, endaweni ye "catfish" -style scams, ngeendlela zokuqinisekisa ezisekwe kwiifoto ezilayishiwe, iiakhawunti zemidiya yoluntu kunye nokuqinisekiswa kwefowuni.Ngelixa usetyenziso lusimahla, unokuthenga iikhredithi zepremiyamu nge $ 2.99 ukwandisa ukubonakala okanye ukubhalisela ukufumana "Amandla aMandla amakhulu," anikezela ngeempawu ezandisiweyo.
19.I-Clover Dating App (i-Android; iOS)
Intwana encinci yeTinder kunye nentwana yeOkCupid, iClover ithatha indlela yokubamba ibhegi ngeendlela ezahlukeneyo zokufumana kunye nokudibana nemidlalo enokubakho, ukusuka kwiTinder-njengokutshintshela kwimibuzo yamaphepha emibuzo, abacwangcisi bomhla, kunye neeprofayili ezineenkcukacha ezinoluhlu lwezinto onomdla kuzo.
I-Clover iyawuthintela umgibe wehonyoni wamava okujolisa ngakumbi, kwaye ke ukuba uyakudika isitayile sokuswayipha, ungasoloko uzama ukuthatha inxaxheba kubaxube abahleli, jonga umdlalo wemibuzo engama-20, okanye uzame uClover's "kwimfuno ukuthandana. "Njengakwezinye iiapps, iClover inee-premium tiers ezinokuphucula ukubonakala kwaye zongeze okanye ziphucule izinto ezikhoyo.
Abazali abangenamaqabane abafuna uthando banokuziva bengakhululekanga ngokuswayipha ngokukhetha kwabo iiapp.(Okanye mhlawumbi abekho- asizelanga kugweba.) Kodwa kubantu abanomdla wokuzibophelela ixesha elide, i-Heybaby kufanelekile ukuba uyihlole.Uhlelo lokusebenza lubeka ngokwalo njengenketho yokuthandana kubantu abanabantwana okanye ngokuqinisekileyo bafuna ukubakhulisa kwixesha elizayo ngokudibanisa abantu kunye namaqabane anomdla ofanayo.
I-Heybaby ijonge ukwahlulahlula kwii -apps ezigxile kubudlelwane ngokusebenzisa iphepha lemibuzo elonwabisayo ukulinganisa ukuhambelana kwakho nabantu abaza kuba ngamaqabane.Kwaye imibuzo malunga nabantwana-kubandakanya imeko yakho yosapho-yangoku-yiza kwangoko, ukuze udibane nabantu abaneembono ezifanayo.
Uhlelo lokusebenza olusungulwe eSan Francisco ekuqaleni, ngezicwangciso zokwandisa ukuya kwezinye iimarike.UDallas wongezwa ukuwa kokugqibela.Okwangoku, i-Heybaby ifumaneka kuphela kwi-iOS, nangona umenzi weapp ejonge ukukhupha ingxelo ye-Android, nayo.
Indlela yokufumana eyona app yokuthandana
Uya kuba nempumelelo enkulu ekufumaneni ukuthandana ngokusebenzisa i-app yokuthandana ukuba uhlala kuqala kwinto oyifunayo.Ukuba ukungqubana okungaqhelekanga kunye ne-hook-up zijolise kuwe, yiba neentloni kwiiapps ezenzelwe ukukunceda ufumane ubudlelwane bexesha elide.Kwangokunjalo, ukuba udiniwe kukuma kobusuku obunye, ii -apps ezithandanayo ezibeka ugxininiso olukhulu ekuswayipheni kunokudibanisa abantu abafanelekileyo ziya kukhathaza.
Ukuthetha ngokudana, akukho nto iyacaphukisa kunokusebenzisa i-app yokuthandana ezaliswe ziiprofayili ezingezizo.Nika ingqalelo kwizinto ezenziwa ziinkonzo zokuthandana ukuze uqiniseke ukuba ubhangqwa kuphela ngabantu abathatha izinto ngokungathí sina (okanye ubuncinci njengawe.) Ikwalicebo elilungileyo ukuthathela ingqalelo izinto ezenziwa ziinkonzo khusela imfihlo yabasebenzisi babo.
Kuba iidolophu ezininzi zisenomda wokuba bangaphi abantu abanokuqokelelana kwiindawo zikawonke-wonke, kuya kuba kuhle ukuqaphela ii -apps ezinikezela ngohlobo oluthile lwengxoxo yevidiyo, ukuze ubomi bakho bothando bungabanjwa ngexesha lobhubhane we-coronavirus oqhubekayo. .
Eyona nto ingcono unokujonga amanyathelo okhuseleko kunye nokuba ingakanani idatha yakho ekwabelwana ngayo.Iindawo zokuthandana zinokophulwa kukhuseleko, njengayo nayiphi na inkonzo, ke sebenzisa iindlela ezifanelekileyo zokusebenzisa igama eligqithisiweyo kwaye ungasebenzisi ulwazi lokungena oludibanise nezinye iiakhawunti.
Ukuthandana kwiRhafu yeNgeniso kunye neeNkcukacha zokuSebenzisa (2021)
Ngo-2021, uTinder waguqula ishishini lokuthandana kwi-Intanethi ngenkqubo elula, swayipha ekunene ukuba unomdla, ushiye ukuba akunjalo.Endaweni yokuba nompu wokudibanisa amawakawaka eeprofayili zokufumana umntu owahlukileyo, abasebenzisi banokuthatha isigqibo sokuba bayamthanda umntu osekwe kwiifoto ezimbalwa.
Xa kuthelekiswa neenkonzo ezazize ngaphambili, i-Tinder yenza ukuthandana kube lula, kodwa kwakhona, njengoko kufunyenwe kwizifundo, ikwenze kwaba kuncinci malunga nonxibelelwano oluhlala luhleli kunye nobudlelwane ngakumbi nangakumbi malunga ne-hook-ups eziqhelekileyo kunye ne-cheesy openers.
Yintoni eyahlukileyo ngeTinder, kwiminyaka yoosomashishini kunye nokuqala, kukuba yayakhiwe yiLatch Labs, indawo yokuqalisa incubator exhaswa yi-IAC, inkampani ebambe iMatch.com, Intlanzi yeNtlanzi kunye ne-OK Cupid.
Endaweni yokuba umntu wangaphandle atyumze ukhuphiswano, i-IAC yazakhela eyayo inyama, ethe yadla isabelo sentengiso esigcinwe yiMatch.com kunye neendawo zayo ezinxulumene nazo.
E-United States, i-Tinder ilawule indawo yokuhlala oko yaqalwa, kodwa eYurophu nase Mzantsi Melika, u-Badoo ubephambili.Yenziwe ngusomashishini waseRussia u-Andrey Andreev, u-Badoo uye wanobomi obuninzi, kubandakanya nemidlalo yezentlalo kunye ne-app yemibuzo kwi-Facebook Games heyday kwii-2021s zakuqala.
I-Badoo yeyona app ikhutshelweyo yokuthandana kwihlabathi, enabasebenzisi ababhalisiweyo abangaphezu kwezigidi ezingama-400, kodwa khange ikwazi ukwenza uphawu eMelika.Ngo-2021, u-Andreev wabambisana no-Tinder-co-founder uWhitney Wolfe Herd, owayishiya inkampani emva kwengxabano nabaphathi, ukufumana iBumble.
Apptopia -Iplatifomu yoBukrelekrele yeNtengiso yeApp
Fumana uqikelelo lwentsebenzo oluchanekileyo lwe-3 + yezigidi ze -apps kumazwe angama-150 +.Yenza izigqibo eziqhutywa yidatha kwaye wandise iqhinga lakho lokusebenza.
Apho iBadoo yahluleka khona, iBumble yaphumelela ekutsaleni abasebenzisi baseMntla Melika kude neTinder.Ithengiswe njenge-feminist dating app, iBumble ivumela abasetyhini ukuba bathathe inyathelo lokuqala, ibanike ulawulo olupheleleyo lwamava.
Ukukhula kweBumble kule minyaka imbalwa idlulileyo kukwaphawule notshintsho kwisimo sokuthandana, njengoko abantu sele beqalile ukujika kwinkcubeko yokuhlangana yeTinder.IHinge, enye i-app ephethwe yi-IAC, itshintshe iqonga layo lonke ngo-2021 ukugxila kubudlelwane bexesha elide.
Oko kwathethi, inkcubeko ayibuyiseli kwixesha leMatch.com.I-Tinder kunye ne-Badoo zisenkokheli kubasebenzisi abasebenzayo ngenyanga, nakwiimarike ezikhulayo ezinjenge China kunye ne-Asia-mpuma ye-Asiya, ii -apps ezithandwayo zokuthandana zigqitha kakhulu kwiinkonzo zexesha elide ekuthandeni.
IiNkqubo zokuDibana eziPhezulu
Isithsaba esinobuhle seQela loMdlalo, esinezixhobo ezingaphezulu kwama-45 zokuthandana.I-Tinder itshintshe ngokusisiseko ukuthandana kwi-intanethi ngokususa ubunzulu kunye nokunika abasebenzisi ulawulo ngakumbi
Olona khuphiswano luphambili lukaTinder eMntla Merika, luyilelwe ukunika abafazi ulawulo lwamava.IBumble yaqalwa ngumsunguli weTinder uWhitney Wolfe Herd, oshiye emva kwengxabano kwinkampani
I-Badoo yaqala kude ngaphambi kweTinder kunye neBumble njengokhangelo lwentlalo, imidlalo kunye nemibuzo.Emva kokufumana isilumkiso esivela ku-Facebook ngo-2021, yatshintshela ekuthandaneni ngokungaqhelekanga ngendlela efanayo neTinder
Ihenjisi inokuba ibimiselwe ukuba ibe yenye yeentsilelo ezininzi zokuthandana, kodwa iqela lahlaziya iapps kubudlelwane bexesha elide kwaye labetha emhlabeni libaleka eMntla Melika.
Ngokungafaniyo nezinye ii -apps ezikuluhlu, ezisebenzisa indawo ngokubanzi ukufumana imatshisi, i-Happn ijolise ikakhulu kubasebenzisi abafanayo nabantu abanokubabona kutshanje.
Ngelixa iTinder, iBumble kunye nolunye uninzi lwee -apps zokuthandana zinezicwangciso zabasebenzisi besini, iGrindr yayiyeyona app yokuqala ukuba ibe yeyabantu be-LGBTQ kwaye ihlala ilolona hlelo luthandwayo kubantu abathandanayo
Ukuthandana ngokungaqhelekanga akuthandwa eTshayina njengaseNtshona, nangona kunjalo, iTantan, eyaziwa ngokuba yiTinder yaseTshayina, iqokelele indawo enkulu yabantu abangatshatanga, ikakhulu abafundi beekholeji
Omnye wabalindi bakudala, Intlanzi yeentlanzi ibikho ukusukela ngo-2021. Itshintshile yaya kwiminyaka yobudala ehambayo, njengenye yeenkqubo ezithandwayo ezisetyenziswa ngabantu abadala
Ingeniso yeNkqubo yokuDibana kwiHlabathi liphela
$ 1.69 yezigidigidi
$ 1.88 yezigidigidi
$ 2.05 yezigidigidi
$ 2.23 yezigidigidi
$ 2.52 yezigidigidi
$ 3.08 yezigidigidi
Ingeniso kwintengiso yenkqubo yokuthandana inyuke ngenqanaba elizinzileyo, ixhaswe ikakhulu yiTinder kunye neBumble, ethe yathimba owona mmandla unenzuzo, eMntla Melika.
Zonke iinkqubo zokuthandana ezigutyungelwe kule phrofayili yecandelo zisebenzisa imodeli ye-freemium esusa umda, njengesixa seeswipe, ecaleni kokubonelela ngeendlela zokweqa ialgorithm yokutshatisa.Nangona kunjalo, umqobo ekungeneni usezantsi kakhulu kunakwiziza zokuthandana ezindala, ke uninzi lwabasebenzisi abazihlawuli iinkonzo zepremiyamu.
Abasebenzisi Bokuthandana Kwisicelo Sehlabathi
Ukwanda kokusetyenziswa kuye kwatyhalwa ikakhulu zizicelo ezitsha, ezinje ngeTinder, Bumble kunye nehenjisi, ezisekwe kwiselfowuni kwaye zenzelwe ngakumbi ukuthandana okungaqhelekanga.Kule minyaka imbalwa idlulileyo, uBumble kunye noHinge bazamile ukusuka kwiTinder, ngokuthengisa imveliso yabo njengobudlelwane ngakumbi kunokubambana.
Ngelixa ukuthandana okungaqhelekanga kungabalulekanga eAsia, kukho iiapps ezimbalwa ezirekhodishe abasebenzisi abasebenzayo ngenyanga.I-Tantan, eqhutywa ngumboneleli wophando lwentlalontle waseTshayina uMono, yenye yezona zidumileyo, kuqikelelwa ukuba zizigidi ezingama-20 zabasebenzisi abasebenza rhoqo ngenyanga.
Ukwabelana ngeNtengiso yeNtengiso yeHlabathi
Imithombo: Airnow, DSR, Mixpanel
I-Badoo kunye neTinder zezona ziqonga zibalaseleyo ehlabathini lonke, nangona iTinder ibonakala isakhula ngelixa iBadoo ilahlekile kubasebenzisi kule minyaka mihlanu idlulileyo.Bumble ngumceli mngeni kubukhulu bukaTinder kwimarike yaseMntla Melika naseYurophu.
Inzala itshintshile ngandlel 'ithile kule minyaka mihlanu idlulileyo, njengoko abasebenzisi bejonga iiapps ezisebenza kubudlelwane bexesha elide endaweni yokuqhagamshelwa okungaqhelekanga.Ngelixa iinkonzo ezindala, ezinje ngeMatch.com kunye neNtlanzi yeNtlanzi, zibonelela ngezi nkonzo zinobuzaza, iBumble kunye neHinge zizamile ukuphinda zifake izicelo zazo kwinkonzo zombini.
Qaphela: Amaxabiso asekwe kubasebenzisi abasebenza qho ngenyanga.
Ukwabelana ngeNtengiso yeApp yaseMelika
Xa kuthelekiswa neziphumo zehlabathi, iBadoo iphantse yabakho kwimakethi yase-US.Ubungakanani beTinder kunye neBumble, xa kuthelekiswa neendawo ezithandanayo zokuthandana njengeMatch.com kunye neNtlanzi yeNtlanzi, zibonisa ukuba ukuthandana kwi-Intanethi kutshintshele njani kumava aqhelekileyo, ajolise kwiselfowuni.I-IAC, abanini beQela loMdlalo, balawula zonke iinkonzo ezikolu luhlu ngaphandle kweBumble neGrindr.
Ukuxabana kweNkqubo yokuDibana kweHlabathi
$ 10 yezigidigidi
$ 4 yezigidigidi
$ 3 yezigidigidi
$ 2 yezigidigidi
$ 0.6 yezigidigidi
Njengolona hlelo lokusebenza luthandwa kakhulu kwingingqi yomsebenzisi-ngeniso ephezulu (eMntla Melika), iTinder ixabiseke ngokuzimeleyo ngaphezulu kweBadoo, enamanani abasebenzisi asebenzayo afanayo ngenyanga.Abaphulaphuli bakaBadoo baseYurophu nase Mzantsi Melika, ngokomndilili kunqabile ukuba bachithe imali kwiinkqubo zokuthandana.
IMagicLab, umphuhlisi emva kweBumble kunye neBadoo, kutshanje itshintshe igama layo lenkampani kwiBumble.Inkampani edibeneyo kulindeleke ukuba i-IPO kwixabiso le- $ 6 ukuya kwi-8 yezigidigidi.Siyakholelwa ukuba iBumble yeyona nto ibaluleke kakhulu kwezi asethi, ngenxa yokukhula kwayo kutshanje kwimarike yase-US.Umphathi omkhulu we-CEO weMicrosoftLab, u-Andrey Andreev, kutshanje uthengise inkampani kwinkampani yotyalo-mali iBlackstone nge-3 yezigidigidi zeedola, incinci kakhulu kunexabiso eliqikelelweyo leBumble.
Ukuxabisa okuphezulu kukaHinge kuvela kubalo lwabantu, ikakhulu abafundi beekholeji zaseNyakatho Melika.
Dating App Ingeniso eqikelelweyo
$ 3.33 yezigidigidi
$ 3.72 yezigidigidi
$ 4.36 yezigidigidi
$ 5.05 yezigidigidi
$ 5.71 yezigidigidi
Icandelo lokusebenza lokuthandana kulindeleke ukuba likhule kwizinga elizinzileyo, njengoko abasebenzisi abaninzi eMntla Melika, eYurophu nase Mzantsi Melika basebenzisa iiakhawunti.
Akunakulindeleka ukuba ukhuphiswano olutsha luza kuvela kwimakethi yaseMntla Melika, njengoko iTinder, iBumble kunye neHinge zigubungela ezobunzulu;abafundi ukuya kwiingcali ezineminyaka ephakathi.Ezinye iinkonzo ezinje nge-OKCupid kunye neMatch.com zigubungela ubudlelwane obudala kunye nobunzima.
Nangona i-China iye yaba yimarike ephambili yokuthandana kwi-Intanethi, ngaphandle kokuba kukho inguquko kwezentlalo enika amandla ukuthandana ngokungaqhelekanga ekufumaneni iqabane, silindele ukuba imakethi ihlale incinci kunoMntla Melika naseYurophu.
Ezona ndawo zidumileyo zokuthandana kwi-Intanethi eUS 2021, ngokobungakanani babaphulaphuli
Ukusukela nge-Septemba ka-2021, uTinder uxele ukufikelela kubaphulaphuli kwabasebenzisi abazizigidi eziyi-7.86 e-United States, isenza ukuba kube yeyona ndawo ithandwayo kwi-Intanethi.Indawo yesibini ebekwe eBumble inezigidi ezi-5.03 zabasebenzisi beselfowuni base-US.Ehlabathini lonke, i-tinder.com ikwindawo yesithathu ethandwa kakhulu kwi-intanethi ukuthandana iwebhusayithi ngoMatshi 2021, malunga nezigidi ezingama-59 zokundwendwela kule nyanga.Indawo ekhokelayo yokuthandana ngeli xesha yayiyibadoo.com, kutyelelwa izigidi ezili-182.5 ngenyanga.
Ubungakanani bomsebenzisi wabantu eMelika
Ngo-Epreli 2021, abantu abaphakathi kweminyaka engama-30 ukuya kwengama-44 ubudala benza esona sabelo sikhulu sabasebenzisi beTinder eUnited States.I-Tinder yayingathandwa kakhulu phakathi kwabantu abadala abakwiminyaka yobudala engama-55-64, inesithandathu kuphela ekhulwini sabaphenduli abasebenzisa i-app yokuthandana.Ukongeza, iTinder itsale kakhulu abesilisa kunabasebenzisi ababhinqileyo, ngezabelo ezingama-72 kunye nama-28 epesenti.
15 Best Sites ukuthandana kunye Apps ngo-2021: Uluhlu Top Online Dating amaqonga ngohlobo
Iindawo zokuthandana kunye neeapps zininzi kule mihla kwaye ukubuza umntu malunga nendawo ayithandayo kuya kwenza impendulo ibe yodwa njengomntu uqobo.
Ngelixa abanye abantu benokuthi bafune uthando kunye nomtshato, abanye banokukhangela into ethe kratya.
Ezona ndawo zithandwayo zokubonelela zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo nangasese, phakathi kwezinye izinto.Eli nqaku lijolise ekubekeni eyona ndawo ingcono yokuthandana kwimeko nganye kunye neenjongo zobudlelwane zomntu ngamnye.
Indawo egqibeleleyo yokuthandanasimahla- yiOkcupid
Eyona ndawo yokuthandanauqhelekileyo-AdultFriendFinder
Olona hlelo lukhululokuthandana-iTinder
Eyona ndawoiphambili yokuthandana kwabantu abadala- iSilverSingles
Eyona nkquboifanelekileyoyobuntu -ihenjisi
Eyona ilungileyo kuma-christian singles -ChristianMingle
Indawo efanelekileyo yokutshata-AshleyMadison
Olona hlelo lokusebenza luhle lokuthandana kwabafazi-iBumble
Abafazi abaninzi kunamadoda-Ukufuna
Indawo yokuthandanaenomdlaengaphantsi kweminyaka engama-30-Zoosk
Zaye zavavanywa njani iZiza zokuBonana eziBalaseleyo:
Ncomo umsebenzisi- kuba kwisiza ngasinye ukuthandana sibheke ncomo app ivenkile, iingxoxo forum, kunye nohlaziyo trustpilot ukufumana sites kunye mlinganiselo uphezulu avareji ehlelo elinikiweyo.
Ubumfihlo nokhuseleko-Wonke umntu uvile amabali ayoyikisayo emihla ekwi-Intanethi emuncu okanye eyingozi.Ezona ndawo zintle zokuthandana zinempawu zobumfihlo ezakhelwe-ngaphakathi kunye neemodareyitha zokungena xa umsebenzisi engekho emgceni okanye ebeka umngcipheko kwabanye.
Iimpawu ezizodwa-Ezinye iiwebhsayithi zokuthandana zinika nje iindlela zokudibana ngqo, nokuba kungokuxoxa okanye ukufowuna ngevidiyo.Abanye banceda abantu bafumane umdlalo wabo kunye nemidlalo yokuhambelana, ukhetho lokucoca, kunye nokunye.Ezi zinto zongezelelweyo zibonisa ithuba elingcono kwimpumelelo.
Iindawo ezili-15 zokuBonana eziBalaseleyo ze-2021
1. I-Eharmony-Eyonailungileyokulwalamano olunzulu
Izigidi zezibini zidityaniswe ngu-Eharmony-enyanisweni, abasebenzisi be-400 + batshata nomntu abadibana naye kwiwebhusayithi yonke imihla.Iqonga liphumelele amabhaso njengeyona ndawo ibalaseleyo yokufumana ubudlelwane obuzinzileyo.
I-Eharmony ifuna ukuba abasebenzisi bagqibe kuvavanyo olude ekubhaleni, olusebenza njenge "inkqubo yokuhambelana ehambelanayo."Indawo ke isebenzisa olu lwazi ukubonisa abasebenzisi ukuba banokuphumelela ekukhetheni ukuthandana.
Le ndlela iqhutywa yidatha, yindlela ekhethiweyo yeso sizathu sokuba i-Eharmony yeyona ndlela ifanelekileyo kuye nabani na ofuna ubudlelwane bexesha elide.
2.Ii-Singles ze-Elite-Ezona zilungileyo kubasebenzi abaqeqeshiweyo
Ubulungu be-Elite Singles bufaneleke kakhulu, busenza ukuba sikhethe ngokugqwesileyo ukuba abasebenzisi bafuna incoko evuselelayo.Phantse iipesenti ezingama-85 zabathathi-nxaxheba banesidanga semfundo ephezulu, kwaye iipesenti ezingama-90 zingaphezulu kweminyaka engama-30.Ezi zibalo ziqinisa amava obomi kwi-equation dating.
Indawo itshatisa abasebenzisi nezinye ii-singles zisebenzisa ialgorithm ejolise kwiimpendulo zabo kwiphepha lemibuzo.Abantu bayisebenzisa ikakhulu ekufuneni ubuhlakani bexesha elide, ngaphakathi nakwamanye amazwe.Okwangoku iyasebenza kumazwe angama-25.
Le ndawo ayenzelwanga nabani na ofuna ubudlelwane bexesha elide.Inika iindlela ezimbini eziphambili: ukudlala ngothando (kwi-app) okanye ukuhlangana.Yiyo leyo, kwaye kwabanye abantu, yile nto kanye abayifunayo.
I-AFF, okanye uMfumani woMhlobo waBadala, ubandakanya uluhlu lwezinto ekunokukhethwa kuzo zonxibelelwano, kubandakanya imiyalezo, ividiyo ("imihla ekwi-Intanethi"), ukutya okukhoyo kunye neengxoxo zoluntu.
Ukubhalisa ngale app kulula.Ngokungafaniyo nezinye iisayithi zokuthandana ezifuna iphepha lemibuzo, i-AFF iyigcina kwinkqubo yokubhalisa yesibini-yesibini.Abasebenzisi bangaqala ukukhangela kwangoko.
4.ISilverSingles-Eyonailungele abantu abangatshatangangaphezulu kweminyaka engama-50
I-SilverSingles ijikeleze iminyaka eyi-17 kwaye yenye yezona zinto zindala zokuthandana nabantu abangaphaya kweminyaka engama-50. Inkonzo iqinisekisa iprofayili nganye, iqinisekisa ukuba abathengi bayo banyanisekile kwaye bakhuselekile.
Abasebenzisi bagcwalisa iphepha elinemibuzo ngobuntu elibandakanya izicwangciso zabo zobomi, izinto eziphambili, isimo sabo, kunye nezinye iinkcukacha, ukuze iwebhusayithi icofe umdlalo ofanelekileyo.
Iqonga lifikelela kwiwebhusayithi okanye usetyenziso lweselfowuni apho ubulungu basisiseko bufumaneka simahla.
5.Bumble- Olukhulu ukhetho lwabafazi
Ukuqhaqhazela akuqhelekanga phakathi kwezicelo zokuthandana kuba kunika amandla abantu basetyhini ukuba baqalise unxibelelwano.Amadoda awakwazi ukunxibelelana nemidlalo yabo yabasetyhini ngaphandle kokuba owasetyhini uqhagamshelana naye kuqala.Oku kuvumela amanenekazi ukuba akhokele kube kanye.
Iqonga ligxile kunxibelelwano kwangoko.Abasebenzisi baneeyure ezingama-24 zonxibelelana, kwaye emva koko, umdlalo uphelelwa.Oku kubonisa ukuba indawo ilungiselelwe ii-hookups ezizenzekelayo, kodwa ikwafanelekile kwabo bangathandi ukuchitha ixesha elininzi bekhangela.
Insiza idibanisa ngaphandle komthungo namaqonga onxibelelwano anje nge-Facebook, Spotify, kunye ne-Instagram, ivumela abasebenzisi ukuba babonise imiba eyahlukeneyo yobuntu babo.Iiakhawunti zikwangqinisisiwe ukunceda ukunqanda iinkangeleko ezingezizo ezivela ekuveleni rhoqo.
6.Ihenjisi- ukujola Innovative app
Inkampani iphinde yavula i-Hinge ngo-2021, kwaye yenye yezona zinto zixoxwa kakhulu ngokuthandana kwiminyaka yakutshanje, ikakhulu ngenxa yamazinga okuphumelela kwabasebenzisi bayo.Phantse iipesenti ezingama-75 zabasebenzisi beHinge bakhetha ukuya kumhla wesibini emva kokudibana nemidlalo yabo.
Abo baneeprofayili zeHinge banokushiya uphononongo, olusetyenziswa yisoftware yeHinge ukunceda ukuphucula ii-algorithms zabo zomdlalo kwixesha elizayo.
Iqonga likaHinge linomdla kuba likhuthaza abasebenzisi ukuba bathande okanye banike izimvo kwicandelo elithile lomnye umntu.Inika indlela yokuba abantu banxibelelane ngaphaya kwengxoxo yesiqhelo.
8.Ukufuna-Kwiishukela ezineswekile kunye neentsana zeswekile
Ukufuna kwahlukile kuba kugxile ekudibaniseni abantu abancinci (iswekile iintsana) nabantu abadala, abazizityebi zeswekile.Kuyabonakala ukuba, ixhaphake kakhulu kunokuba ininzi ikholelwayo, inikwe iqonga ngoku elinababhalisi abangaphezulu kwesigidi se-10.Umntu ngamnye unokuchaza imigaqo yakhe ngaphambi kokuba aqhagamshele, nokuba bafuna ukuhamba, bafuna isibonelelo, okanye ezinye iinkcukacha.
Kukho umlinganiso ophakamileyo wabasetyhini ukuya kwindoda, oko kuthetha ukuba ootata banezinto ezininzi abanokukhetha kuzo, nangona ikwabonisa ukuba ukhuphiswano lunokuba sengozini kwiintsana.
9.JDate- singles zamaJuda kuphela
I-JDate yinkonzo yokubonana ngokukodwa yabangamaJuda abangatshatanga.Yasekwa ngo-1997 kwaye ngoku iyafikeleleka kumazwe angaphezu kwe-100, ivumela abasebenzisi ukuba banxibelelane nabantu abangatshatanga abangamaYuda ngeelwimi ezintlanu ezahlukeneyo (isiNgesi, isiHebhere, isiFrentshi, isiJamani, neSpanish)
Xa kuziwa kwimitshato yamaJuda ekwi-Intanethi, i-JDate inoxanduva lokuthelekisa ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 zezo zibini.
Abasebenzisi banokunxibelelana nabani na onobulungu basimahla okanye obuhlawulelweyo.Inkonzo yabathengi itshekisha iprofayile nganye ukuqinisekisa ukuba iyenziwa ngabathengi bokwenyani.
10.ChristianMingle- Best Christian ukuthandana isayithi
UChristianMingle unceda abasebenzisi ngaphakathi koluntu lwamakristu ngokufumana uthando lwabo lwanaphakade.Iqhayisa ngaphezulu kwesigidi sabasebenzisi, kwaye indawo ikhuthaza ngokucacileyo "ukuthandana okusekwe kwinkolo" kwithuba elide elinokubakho.
Kukho ukhetho lweakhawunti yasimahla okanye ubulungu benyanga be- $ 29.95.Le yokugqibela iza nesiqinisekiso, apho umsebenzisi anokufumana iinyanga ezintandathu simahla emva kokuba ubulungu beenyanga ezintandathu buphelile ukuba abafumani nto ifanelekileyo.
11.Zoosk- Uluntu olukhulu lwamanye amazwe
IZoosk inelona qonga likhulu kwinqanaba lehlabathi, elinamalungu angaphezu kwezigidi ezingama-40 kwihlabathi liphela.Suku ngalunye, aba basebenzisi bangenisa ngaphezulu kwesigidi semiyalezo kwiilwimi ezingama-25 ezahlukeneyo.IZoosk isebenza kumazwe angaphezu kwama-80.
Iwebhsayithi isebenzisa into ebizwa ngokuba "yitekhnoloji yokuziphatha komdlalo" ukunceda ii-singles zifumane abantu abafanelekileyo abanokulingana nomdlalo owenziwe ezulwini.
Emva kwexesha lokulingwa lasimahla, ubulungu beZoosk buxabisa i $ 29.99 ngenyanga.
12. I-Reddit R4R-Eyonailungele abasebenzisi beReddit
I-R4R, okanye i-Redditor ye-Redditor, i-subreddit enikezelwe kubasebenzisi abaxhumayo.Iqonga alisebenzisi iskimu sokudibanisa, endaweni yoko, yindawo enkulu yentengiso zobuqu.
Iikhrayitheriya zomsebenzisi zokukhangela zivelisa iziphumo abazikhethileyo.Abasebenzisi beReddit bayisebenzisela ukufumana imisebenzi, izihlobo, amaqela, ii-hookups, kunye nobudlelwane bexesha elide.
Nangona iforum ngokubanzi, kusekho imigaqo enxulumene nobudala, ukuba bucala, ukuba semthethweni nokuziphatha.Umzekelo, iiposti ze-NSFW zivumelekile kodwa mazibhalwe enjalo ukuze abasebenzisi bakwazi ukuthatha isigqibo sokuba bafuna ukujonga iposti okanye hayi.
13.OkCupid- Simahla kwaye iyathandwa
I-OkCupid yenye yezona ndawo zaziwayo zokuthandana kunye neempawu ezigcweleyo ezinokuthi zisonjululwe ngamanye amalungu ngaphambi kokudibanisa.Iyafumaneka kuzo zombini i-desktop kunye nohlobo lweselfowuni, eneenkcukacha ezininzi ezinokuthi zizaliswe ngabasebenzisi ngezona ziphumo zihle.
Indawo ibandakanya kakhulu, ngaphezulu kwesini kunye nokuzikhethela ngokwesini.
14.Ashley Madison- Best utshatile ukuthandana isayithi
UAshley Madison lolunye uhlobo, lwenzelwe abantu abatshatileyo abafuna ukuba nemicimbi yabucala.Ayinxibelelananga neeakhawunti zemidiya yoluntu kwesi sizathu.
Kukho ezinye izithintelo zabucala kunye neempawu zokunceda abasebenzisi ukuba bahlale bengaziwa ukuba bayoyika ukubanjwa.Ukongeza, u-Ashley Madison unokhetho lokuhamba apho amalungu anokukhangela indawo azayo kwangaphambili.
I-Match.com- Umdlaloubekhonaukusukela ngo-1995 kwaye unikezela ngenkqubo yokucebisa yokubonisana ukunceda abathathi-nxaxheba kwimidlalo yokutshatisa kunye nemibono yokuthandana.
Tinder -Leapp yokuthandana ithandwa ngokubanzi kwaye iza ngokuthembeka.Uninzi lwabantu luyisebenzisela ii-hookups, zinikezwe isiseko somsebenzisi esikhulu kunye ne-algorithms eqhutywa yindawo.
I-BlackPeopleMeet-Ngaphezulu kweminyaka eli-18, iBlackPeopleMeet ibidibanisa ii-singles zase-Afrika zaseMelika zifuna uthando.Amalungu esiza ayi-100,000 + angadlala ngothando, nge-imeyile, kwaye abone ukuba ngubani ojonga iiprofayili zabo.
I-Grindr-I-Grindr yenzelwe kuphela abantu be-LGBTQA +.Isekwe kwindawo, kwaye abasebenzisi ngokuyintloko bayisebenzisela ukukhonkxa, nangona umdlalo wexesha elide kunokwenzeka.
Intabalala yeentlanzi-Le webhusayithi yokuthandana isekwe eCanada, kodwa ivumela abasebenzisi ukuba banxibelelane nabantu abavela kwihlabathi liphela.
Kutheni abantu basebenzisa iiSayithi zokuDibana kwi-Intanethi?
Iindawo zokubonana zivelisa abantu echibini elikhulu kakhulu labantu kunokuba umntu omnye abe nethuba lokudibana ebomini bokwenyani.Oku kunjalo ngakumbi kubasebenzisi abanamaqela entlalontle, abatsha edolophini, okanye ngenye indlela.
Ukusebenzisa ezi ndawo kunokuvumela abasebenzisi ukuba bakhethe ngakumbi ngokusekwe kwiindlela ezibaluleke kubo: amaxabiso abelweyo, iindlela zokuzonwabisa, okanye uhlobo lolwalamano abalifunayo.
Ngaba ukuthandana Apps Safe?
Ngokubanzi, ewe, ukuthandana zokusebenza zikhuselekile, kodwa kusafuna ukuqonda kunye nononophelo.Iiapps zinempawu zabucala endaweni yokunceda amalungu aphume, njengokuqinisekiswa kweprofayili.Ezinye iiwebhusayithi zikwaskena abathathi-nxaxheba ngesandla, zongeza ukhuseleko olongezelelweyo kwinkqubo.
Abantu akufuneki babonelele ngolwazi lomntu siqu ngaphambi kokudibana nomntu ebomini bokwenyani, njengegama labo, idilesi, okanye kwanommelwane wabo.Kukwalumkile ukucwangcisa umhla wokuqala kwindawo kawonkewonke.Ukuqhagamshelana nomhlobo kwangaphambili kwaye ubazise ukuba baya kuthandana nomntu ongamaziyo ayisiyonto imbi leyo.
Uqinisekisa njani ukuba uKhuseleko lwakho ngelixa uthandana kwi-Intanethi?
Ungaze unikezele ngolwazi lomntu siqu kwi-intanethi, ngakumbi ngaphambi kokudibana ngobuqu.Olu lwazi lubandakanya ifani, umqeshi, idilesi, kunye nendawo yokuhlala.
Xa udibana naye nabani na kwi-Intanethi, cwangcisa imihla yokuqala ukuba yenzeke kwiindawo zikawonke-wonke.Le isenokuba yindawo yokutyela, ihotele, iholo yemidlalo yeqonga, okanye enye indawo kawonke-wonke.Ziphephe iindawo ezikwanti ezinjengeelwandle, kwaye ungaze uvumele abantu ongabaziyo bangene endlwini.
Okokugqibela, nxibelelana nomhlobo ngaphambi komhla ukuze ubazise malunga nexesha kunye nexesha lokubuya elilindelweyo.Bazise xa ilixesha lokuba uye ekhaya.Ukubonelela ngolongezelelo lokhuselo, cela ukuba babize okanye babhalele ngalo mhla ukuqinisekisa ukhuseleko oluphezulu.
Iziphakamiso zomhla wokuqala
Ukwenza amadinga okokuqala kunokuba nzima!Ukuqinisekisa ukhuseleko ngokugqibeleleyo kunye nokudibana nomdlalo ngobuqu, landela ezi ngcebiso:
Gcina ingqondo evulekile.Abantu banokubonakala bahluke kakhulu emntwini kunokuba besenza kwi-Intanethi, ke zilungiselele ukuba utshintsho olukhethiweyo lutshintshe.
Kuphephe ukuba sesikweni kakhulu.Ukuseka intlanganiso yentlalontle, njengomhla wesidlo sasemini, kuvumela abasebenzisi ukuba bazane ngaphandle kokuziva benyanzelekile ukuba bachithe iiyure kunye.
Ukuphonononga iincoko ngaphambi kokuya kumhlaPhinda ufunde iprofayili yomntu kwaye uphonononge okwakuxoxiwe, kunye nokucwangcisa izihloko zengxoxo ngokubanzi.
Ngaba kunokwenzeka ukuba uhlakulele ubudlelwane obuNzulu xa uthandana kwi-Intanethi?
Ewe kunokwenzeka!Ukuba abantu ababini badibana, bayahambelana, kwaye ikhemistri ikhona, ubudlelwane bunokujika bube yinto ezinzileyo nekhuselekileyo.Kwenzeka yonke imihla, enkosi kwiindawo ezinje nge-Eharmony.
Iindawo zokuDibana kwi-Intanethi esiphelweni
Icebo ukuthandana online kukuba umntu ukwazi oko bafuna kwaye kufuneka kubudlelwane kwangaphambili.Ngokusekwe kuluhlu olungentla, zininzi iindlela zonxibelelwano ezifumaneka kwezi ndawo.
Gcina isilumkiso kodwa ingqondo evulekileyo xa usebenzisa indawo yokuthandana.Indawo nganye apha inento yokubonelela, kuxhomekeke kwinto enqwenelwa ngumsebenzisi.
Ndwendwela tigersoftinder.com ngokuthelekisa imveliso kunye nokuphononongwa.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Olu lwazi alunalo ingcebiso okanye isithembiso sokuthenga.Naluphi na ukuthengwa okwenziwe kule ntetho ingasentla kwenzelwa umngcipheko wakho.Qhagamshelana nomcebisi oyingcali okanye oqeqeshiweyo ngaphambi kokuthenga.Naluphi na ukuthengwa okwenziwe kule khonkco kuxhomekeke kwimigqaliselo yokugqibela kunye neemeko zentengiso yewebhusayithi ekhankanywe kumthombo.Umshicileli womxholo kunye namaqabane akhe okusasaza asezantsi awathathi xanduva ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo.Ukuba unazo naziphi na izikhalazo okanye imicimbi yelungelo lokushicilela enxulumene nelinqaku, nceda unxibelelane nenkampani malunga nezi ndaba.Unxibelelwano oluqulethwe kolu hlaziyo lwemveliso lunokubangela ikhomishini encinci kumbhali ukuba ukhetha ukuthenga imveliso ekucetyiswa ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo kuwe.
i-Happyn -Isixhobo sokuthandana sasekhaya